Thwebula Line 5.23.0.2134 – Windows – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: Line
Line – a isofthiwe ethandwa yokuxhumana phakathi kubasebenzisi emhlabeni wonke. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze amakholi wezwi, video izingcingo, imiyalezo esheshayo, noma amafayela bese ukunikeza interlocutor ngolwazi mayelana nendawo yakho yamanje. Line iqukethe isethi enkulu ukumamatheka standard futhi ngomdlandla, ngazo ungakwazi ukuveza imizwelo ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba ubhalise ukuze umdwebi oyintandokazi, brand ethandwayo noma uhlelo TV bese wamukele Izindaba ehlinzekwe kuphela kubasebenzisi Line.
Ukukwazi ukwenza yezwi kanye video izingcingo, umyalezo osheshayo noma ifayela
Function ukuhlinzeka ngolwazi interlocutor mayelana nendawo yakho yamanje
Isethi enkulu ukumamatheka
Le software idinga ukuba ubhalise kumakhalekhukhwini
Amazwana ku Line
Line software ehlobene
Ithuluzi ukuba bandise amathuba ngesikhathi umsebenzi nge-webcam. Uhlelo oluhlanganisa iqoqo imiphumela ezahlukene futhi ikuvumela ukuba wengeze ukuba izingxoxo ividiyo.
Ithuluzi ukudala flash oshayelayo bootable. Isofthiwe ikuvumela ukudlulisa ukufakwa amafayela idatha abathwali ukufakwa software noma uhlelo lokusebenza.